ယူးယောင်ချူး - ဝီကီပီးဒီးယား
Yoo Young-Chul (유영철)
(1970-04-18) ဧပြီ ၁၈၊ ၁၉၇၀ (အသက် ၅၁)
Mapo-gu, ဆိုးလ်မြို့၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ
မိုးကာအင်္ကျီနှင့် လူသတ်သမား (레인 코트 킬러)
ခိုးမှု (၁၉၈၈၊ ၁၉၉၁၊ ၁၉၉၃၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၄)
ကလေးသူငယ် လိင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ ရောင်းချမှု (၁၉၉၅)
ခိုးမှု၊ အတုလုပ်မှု၊ အယောင်ဆောင်မှုforgery (၁၉၉၈)
ကွပ်မျက်ခံရန် အကျဉ်းထောင်တွင်း၌ စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ
Resentment toward the rich and women
၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၀၄
ဆိုးလ်အကျဉ်းထောင် (၂၀၀၄ မှ စတင်)
ယူးယောင်ချူး (유영철) (၁၉၇၀ ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် မွေးဖွား) သည် တောင်ကိုရီးယား ကွင်းဆက်လူသတ်သမား နှင့် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားသည့် လူသားစားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ပြည့်တန်ဆာနှင့် လူချမ်းသာ သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကြသော လူ ၂၁ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သူက ဝန်ခံသော်လည်း (လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ ကြောင့် ၁ မှုကို ပလပ်လိုက်ရသည့်အတွက်) ဆိုးလ်ဗဟိုခရိုင်တရားရုံးက သူ့အား အမှု ၂၀ အတွက်သာ ရုံးတင် စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ သားကောင်များအနက်မှ ၃ ဦးအား မီးရှို့ပြီး အနည်းဆုံး ၁၁ ဦးအား စိတ်တောက်လှီးဖြတ်ကာ အချို့သူများ၏ အသဲများအား စားသောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ စက်တင်ဘာ နှင့် အဖမ်းခံရချိန် ၂၀၀၄ ဇူလိုင် အကြားတွင် ပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်ကင်မရာရှေ့၌ "မိန်းမတွေက မိန်းမရွှင်တွေ မဖြစ်သင့်ဘူး။ လူချမ်းသာတွေ ကလည်း သူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်" ဟု ယူးက လူသတ်ရန်စေ့ဆော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ဖော် ရှင်းလင်းသည်။
၂ ကွင်းဆက် လူသတ်မှု
၂.၁ လူသတ်မှုဖြင့် အဖမ်းခံရခြင်း
၂.၂ လူသတ်ရန် စေ့ဆော်မှုများ
၂.၃ တရားခွင် နှင့် အပြစ်ဒဏ်
၃ ဘဝဖြစ်စဉ်များနှင့် ပြစ်မှုများ
၄ အစုလိုက် လူသတ်ပွဲ
၅ ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခြင်း
၁၉၉၂ တွင် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး သား ၁ ဦးရှိသည်။ အခြားစွဲချက်များအတွက် ၁၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် လူသတ်မှုများမတိုင်မီကပင် ထောင်ဒဏ် စုစုပေါင်း ၇ နှစ်ကျခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၃ စက်တင်ဘာမှနိုဝင်ဘာအတွင်း လူချမ်းသာ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကာ တူဖြင့် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်သည်။ ကျူးလွန်သည့်အခါတိုင်း ဖောက်ထွင်း-လူသတ်မှု အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း ငွေများ ယူဆောင်သွားခြင်းမရှိသဖြင့် ရဲအမှုလိုက်များအား ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အရှိန်မြှင့်လာသည့်အခါ အနှိပ်သည်အမျိုးသမီးများအား ပြောင်းလဲ ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ဇန်နဝါရီတွင် အသေးစားခိုးမှုဖြင့် ခေတ္တအဖမ်းခံရ သော်လည်း ၂ ရက် အကြာတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၀၄ မေမှ စတင်ကာ ပြည့်တန်ဆာများကို ဆိုးလ်မြို့အနောက်ပိုင်းရှိ သူ၏ အိမ်ရာသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ၎င်းတို့နှင့် ပျော်ပါးပြီးသည့်နောက် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်သည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖုံးကွယ်နိုင်ရန် သားကောင်များအား ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများအား ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ မြို့ပတ်လည်တောင်ကြောတွင် မြုပ်နှံထားခဲ့သည်။ ယူး အဖမ်းခံရပြီးသည့်နောက် ဘုံဝမ်ဘုရားကျောင်းနောက်ဘက် တောင်ကြောမှ အလောင်း ၁၁ လောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိသည်။
ကနဦးစစ်မေးမှုများအတွင်း လူ ၁၉ ဦးအား သတ်ဖြတ်မှုအတွက် ဝန်ခံခဲ့သည်။ အသက် ၄၅ နှစ် လမ်းဘေးဈေးသည် အမျိုးသား ၁ ဦးအား သတ်ဖြတ်မှုအတွက် ၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၁၈ တွင် ထပ်မံ ဝန်ခံသည်။ အသေးစိတ်ကို မပြောသော်လည်း အဖမ်းခံရပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာ ၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၁၉ ၌ လူ ၂၆ ဦးအား သတ်ခဲ့ကြောင်း အဆုံးတွင် ဝန်ခံထွက်ဆိုသည်။ အသတ်ခံရသူများတွင် ပါဝင်သူအချို့မှာ ရှေ့က ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ကြေးရတတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အနှိပ်သည် အမျိုးသမီးများအား ရွေးချယ် ကျူးလွန်ဟန်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပေ။ အသတ်ခံရသူ အနှိပ်သည်အမျိုးသမီးများအနက်မှ ၂ ဦးမှာ အနှိပ်ကုထုံးတွင် မပါဝင်ဟု ၎င်းတို့ သူငယ်ချင်းများ၏ ပြောပြချက်အရ တိုင်ကြားထားခြင်း မရှိသေးသော အခြားအသတ်ခံရသူများ ရှိနိုင်သေးသည်ဟု ယူဆရသည်။ ဆိုးလ် အနောက်တောင်ဘက်ပိုင်း၌ ညနက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးအချို့ကို ဓားထိုးသတ်သည့် "မိုးတဖြိုင်ဖြိုင် ကြာသပတေး" လူသတ်သမားမှာ ၂၀၀၄ ဧပြီမှစတင်၍ လှုပ်ရှားနေခဲ့သော်လည်း အဆိုပါလူသတ်မှုများနှင့် ယူး အကြား ဆက်နွယ်မှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှာမတွေ့ခဲ့ပေ။
၂၀၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ၌ အီမန်ဒုံတွင် (အင်္ကျီဆိုင်အလုပ်သမား) မိန်းမငယ် ၁ ဦးအား ပြည့်တန်ဆာဟု ထင်မှတ်သည့် အတွက် သတ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ရက်အနည်းငယ်အကြာ၌ ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ရဲအရာရှိအယောင်ဆောင်၍ စစ်ဆေး မေးမြန်းရန်ဟု သူမအား ဟန်ဆောင်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ သက်သေအထောက်အထားများမပြနိုင်သော်လည်း အသတ်ခံရ သူများ၏ အသားကို စားခဲ့သည်ဟု ယူး က အဖမ်းခံရပြီး ၁ လ ခန့် အကြာတွင် ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၁၅ တွင် ယူး အချုပ်ကျခဲ့ပြီး ကြေးရတတ် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အနှိပ်သည်အမျိုးသမီးများအား ပစ်မှတ်ထားပြီး လူ ၁၉ ဦးအား သတ်ခဲ့ကြောင်း အစပိုင်းတွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။ မကြာမီက ဝန်ထမ်းအချို့ ပျောက်ဆုံးသွားသော အနှိပ်ခန်းသို့ ယူး ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှ ၎င်းအပေါ် သံသယမြင့်တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အလားတူ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု များ လက်ခံခဲ့သည့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုင်ဝန်ထမ်းအချို့ကို အဖော်ပြုလျက် ရဲအရာရှိ ၁ ဦးနှင့်အတူ ချိန်းဆိုထားသည့် နေရာသို့သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း ယူး ရောက်မလာခင် ရဲအရာရှိ ပြန်သွားသည့်အတွက် အနှိပ်ခန်း ဆိုင်ဝန်ထမ်းများက လက်ရဖမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများက ထိန်းသိမ်းထားသည့် ယူး ကို အခြားရဲအရာရှိ ၁ ဦးက လက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အချုပ်ကျနေစဉ်အတွင်း အတက်ရောဂါလက္ခဏာ ပြဟန်ဆောင်ကာ အချုပ်အနှောင်များ ပြေလျော့သွားချိန်၌ ရဲများထံမှ လွတ်မြောက်သွားခဲ့သေးသော်လည်း ၁၂ နာရီအကြာတွင် ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၌ မုဒိမ်းမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရစဉ်ကလည်း တက်ဟန်ဆောင်ကာ ထွက်ပြေးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးသည်။
ယူးအား ဇူလိုင်နှောင်းပိုင်းတွင် ရှေ့နေရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်လာစဉ် အီမန်ဒုံ လူသတ်မှုမှ သားကောင်၏ မိခင်က ထီးဖြင့်ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ပြီး ရဲများကသာ စောစောစီးစီးဖမ်းနိုင်ခဲ့လျှင် သမီးဖြစ်သူ အသက်ရှင်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ ရဲဝန်ထမ်း ၁ ဦးက ယူးအား ချုပ်ထားရသည့်အတွက် လက်မအားသောကြောင့်ဟုဆိုကာ မိခင်ဖြစ်သူ ၏ ရင်ဘတ်ကို ခြေဖြင့်ကန်၍ ဟန့်တားခဲ့သည်။
အဖမ်းခံရပြီးနောက် သူ၏ တိုက်ခန်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိရသည့် ပစ္စည်းများအား ထောက်ရှုလျက် Public Enemy, Very Bad Things နှင့် Normal Life စသည့် ရုပ်ရှင်များအား မှီး၍ လူသတ်မှုများအား ယူးက အကွက်ချခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းချက်များ ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ တွင် ဘူဆန်မြို့၌ လူချမ်းသာ ၉ ဦးအား သတ်ခဲ့သော ကွင်းဆက်လူသတ်သမား ဂျုံ ဒူ-ယွန်းအား အားကျအတုယူခဲ့ကြောင်း ယွန်းက နောက်ပိုင်းတွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။
ချမ်းသာသူများအား မကျေနပ်ချက်မှာ ဆင်းရဲချို့တဲ့သည့် ငယ်ဘဝကြောင့် အိမ်ကြီးရခိုင်နှင့်နေထိုင်နိုင်သူများအား မနာလိုစိတ်ခံစားရခဲ့ချိန် ငယ်စဉ်တောင်ကျေးဘဝမှ အမြစ်တွယ်လာခဲ့သည်ဟု ယူးက ပြောသည်။ ရာဇဝတ်နှင့် မကင်း သည့် အတိတ်ဘဝကို သိရှိသွားချိန်တွင် စွန့်ခွာထားခဲ့သည့် အနှိပ်သည် ရည်းစားမှတဆင့် မိန်းမများအပေါ် ရန်လို မုန်းထားမှု အစပြုခဲ့သည်။
တရားခွင် နှင့် အပြစ်ဒဏ်[ပြင်ဆင်ရန်]
လူသတ်မှုများနှင့် ယူးအား ဆက်စပ်မှုအား လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်မည့် သက်အသေအထောက်ထား အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝန်ခံသည်။ ၂၀၀၄ စက်တင်ဘာ ၆ တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထွက်ပြီး ခုခံချေပရန် ငြင်းပယ်ပြီး တရားခွင်ကို သပိတ်မှောက်ရန် နှင့် အသတ်ခံရသူများအား တောင်းပန်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ယူး က ကြေညာသည်။ ရပ်တန့်လိုစိတ်မရှိကြောင်း ယူး က ကြွားဝါသည်။ ၂ ပတ်အကြာ အတင်းအကျပ် ရုံးထုတ်ခံရသည့်အခါ တရားသူကြီး ၃ ဦးထံ ခုန်အုပ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၄ အီမန်ဒုံလူသတ်မှုအတွက် ထွက်ဆိုဝန်ခံချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည်။ ၂၀၀၄ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် နောက်တရားခွင်၌ ရင်ဆိုင်ရန် ငြင်းဆိုပြီး မတိုင်ခင်ညက မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ၃ ပတ်အကြာ၌ တရားစစ်ဆေးကြားနာမှုအား ထပ်မံနှောင့်ယှက်ပြီး သူ့အား ကျိန်ဆဲသည့် တရားခွင် ကြားနာသူ တဦးအား တိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ အဆုံး၌ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်စေရန် ရှေ့ဆက် မလုပ်ဆောင်တော့ပါဟု ယူးက ခံဝန် လက်မှတ်ရေးထိုးရသည်။
အစိုးရရှေ့နေများက သေဒဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုရာ ယူး က ထို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ တွင် (၂၀၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ၌ အီမန်ဒုံမှ အမျိုးသမီး ၁ ဦးအား သတ်မှုမှာ အပယ်ခံရ) လူသတ်မှု ၂၀ အတွက် သေဒဏ် ချမှတ်ခံရသည်။ ၂၁ မှုအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် အစိုးရရှေ့နေများက လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း အောက်တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရားရုံးချုပ်က ၂၀၀၅ ဇွန် ၈ တွင် အတည်ပြုလက်ခံလိုက်သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ ထိတ်လန့်ရွံရှာရသည့် သူ၏ မှုခင်းကြောင့် သေဒဏ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ငြင်းခုံစကားရည်လုမှုအား အရှိန်မြင့်စေခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ သေဒဏ်ပေးနိုင်သော်လည်း ၁၉၉၇ မှ စ၍ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်မှု မရှိတော့ရာ ယူးအား ဖမ်းဆီးရမိမှုမတိုင်ခင် သေဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းမှာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ပုံပေါ်သည်။ သူ့မှုခင်းအား သိရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သေဒဏ်အား ထောက်ခံမှုများ တိုးပွားလာသည်။
"လူ ၂၀ ကို သတ်ဖြတ်မှုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ အရင့်အရင်က မဖြစ်ခဲ့ဖူးသေးတဲ့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ လူ့အသိုင်းအဝန်း တခုလုံးအပေါ် ကျရောက်ခဲ့တဲ့ နာကျင်မှုတွေအတွက် မင်းအတွက် သေဒဏ်ကတပါး တခြားမရှိတော့ဘူး" ဆိုးလ် ဗဟို ခရိုင်တရားရုံးက ပြောသည်။
လက်ရှိ၌ ဆိုးလ်အကျဉ်းစခန်းတွင် ယူးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
၁၉၉၈ - ခိုးမှု
၁၉၉၁ - ခိုးမှု (ထောင်ဒဏ် ၁၀ လ)
၁၉၉၃ ဇွန် ၂၃ - ရည်းစားနှင့်လက်ထပ်
၁၉၉၃ - ခိုးမှု (ထောင်ဒဏ် ၈ လ)
၁၉၉၄ အောက်တိုဘာ ၂၆ - သား ၁ ဦး မွေးဖွား
၁၉၉၅ - ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ ရောင်းချမှု (ကိုရီးယား ဝမ်ငွေ သန်း ၃၀ နှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်)
၁၉၉၈ - ခိုးမှု ၊ အတုလုပ်မှု ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ခိုးယူမှု/အယောင်ဆောင်မှု (ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်)
၂၀၀၀ - ကလေးလိင်အကြမ်းဖက်မှု (မုဒိမ်းမှု) (ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ခွဲ)
၂၀၀၀ အောက်တိုဘာ ၂၇ - ဇနီးနှင့် ကွာရှင်း
၂၀၀၃ စက်တင်ဘာ ၁၁ - ထောင်မှလွတ်
၂၀၀၃ စက်တင်ဘာ ၂၄ - ပထမဆုံး သားကောင်များအား သတ်ဖြတ်
၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ - သေဒဏ်ချခံရ
၁ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၃ စက်တင်ဘာ ၂၄ (အသက် ၇၂ နှင့် ၆၇) ၊ ဂန်နမ်ရပ်ကွက် ဆိုးလ်မြို့။ ပထမသားကောင်၏ လည်ပင်းကို ဓားဖြင့်ထိုးပြီး ဦးခေါင်းအား (၄ ကီလိုဂရမ်ရှိ) တူဖြင့် ထုသတ်။ ဒုတိယသားကောင် (ပထမသားကောင်၏ ဇနီး) ကို တူဖြင့် သတ်။
၂ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၉ (အသက် ၈၅ ၊ ၆၀ နှင့် ၃၅) ဂျုံနိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ တူဖြင့် လူ ၃ ဦးအား သတ်။
၃ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၁၆ (အသက် ၆၀) ဂန်နမ်ရပ် ဆိုးလ်မြို့။ တူဖြင့် သားကောင်၏ ဦးခေါင်းအား ထုနှက်။ ထို့နောက် အသတ်ခံရသူ၏ သားဖြစ်သူက ၁၃း၃၀ တွင် တွေ့ရှိသော်လည်း ၁၄း၀၀ တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
၄ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၁၈ (အသက် ၅၃ နှင့် ၈၇) ဂျုံဂယိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ လူ ၃ ဦးအား တူဖြင့် သတ် ၊ မီးခံသေတ္တာအား ဖွင့်ရန် ကြိုးစားစဉ် ဒဏ်ရာရခဲ့။ သက်သေအထောက်အထားများ ဖျောက်ဖျက်ရန် အိမ်ကို မီးရှို့ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ - (ကြေးကြီးအပျော်မယ်) ရည်းစားအသစ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း ယူး၏ ပြစ်မှုရာဇဝင်ကို သိရှိသွားပြီးနောက် သူမအား ထပ်မတွေ့ရန် ယူး အား ပြောခဲ့သည်။ သည့်နောက်တွင် လက်စားချေသည့်အနေဖြင့် မိန်းမပျိုအား သတ်ဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့။
၅ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ မတ် ၁၆ ၊ (အသက် ၂၃) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ကြေးကြီးအပျော်မယ် ၁ ဦးအား လည်ညှစ်သတ် ၊ အလောင်းအား ခုတ်ပိုင်းပြီး ဆော့ဂန် တက္ကသိုလ်အနီး လမ်းကြားပေါ်တွင် စွန့်ပစ်ခဲ့။
၆ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ ဧပြီ ၆ (မည်သူမည်ဝါမသိရ) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ကြေးကြီးအပျော်မယ် ၁ ဦးအား သူ၏ တိုက်ခန်းသို့ မျှားခေါ်လာကာ တူဖြင့် သတိမေ့သည်အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့ ၊ ရေချိုးခန်းအတွင်း ခေါင်းဖြတ်ကာ ဦးခေါင်းရိုက်ခွဲ ၊ ခန္တာကိုယ်အား ဖြတ်တောက်ပြီး ဆောင်ဒဲမွန်းရပ် ဘုံဂွန်ဘုရားရောင်းအနီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်၌ အလောင်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့။
၇ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ မေ (အသက် ၂၅) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၈ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ ဇွန် ၁ (အသက် ၃၅) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၉ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ ဇွန်လဆန်း (မည်သူမည်ဝါမသိရ) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၁၀ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ ဇွန် ၉ (အသက် ၂၆) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၁၁ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ ဇွန် ၁၈ (အသက် ၂၇) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၁၂ ကြိမ်မြောက် - ၂၀၀၄ ဇွန် ၂၅ (အသက် ၂၈) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၁၃ ကြိမ် - ၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၂ (အသက် ၂၆) ၊ မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၁၄ ကြိမ် - ၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၉ (အသက် ၂၄ နှစ် အဲဆောင်ဂီမှ ကြေးကြီးအပျော်မယ်) ၊ မက်ဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၁၅ ကြိမ် - ၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၁၃ (အသက် ၂၇ နှစ် အဲဆောင်ဂီမှ ကြေးကြီးအပျော်မယ်) ၊ မက်ဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့။ ၆ ကြိမ်မြောက် လူသတ်မှုအတိုင်း။
၂၀၀၄ ဇူလိုင် ၁၅ နံနက် ၅ နာရီတွင် မာဖိုရပ် ဆိုးလ်မြို့ ဂရန်းမာ့တ်အနီး၌ ယူး ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က လက်ရဖမ်းမိ။
The Chaser (၂၀၀၈) ယူး၏ ဇာတ်လမ်းအားမှီးထားသည့် သရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း။
↑ Yoo Young-chul Included in World’s 31 worst Serial Killers Archived November 12, 2014, at the Wayback Machine.. koreatimes (2010). Retrieved on 2014-10-11.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ Ahn, Yong-hyun။ "Serial Killer Claims to Have Eaten Victims' Organs"၊ 13 August 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ "Suspect held in killings of masseuses, elderly"၊ 18 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Serial Killer Confesses to Additional Murders"၊ 19 July 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Serial killings: Police finding more evidence"၊ 19 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ "Seoul man 'admits killing spree'"၊ 18 July 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ "Police end serial murder probe"၊ 26 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Police work on other murder ties"၊ 20 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ "Serial murders have long history in Korea"၊ 18 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Police try to calm fearful citizens"၊ 8 August 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Seoul murders: Serial killer at work?"၊9July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Killer admits to one more slaying"၊ 23 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ "Bizarre confession made"၊ 13 August 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Serial killer was caught by masseuses, not the police"၊ 20 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ "Yoo's history hints at drive to kill, escape punishment"၊ 19 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Prosecutors Begin Investigation of Serial Killer"၊ 26 July 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Im, Jang-hyuk။ "Police apologize for kicking woman"၊ 27 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim, In-gu။ "Were Movies Yoo Young-chul's Murder Textbooks?"၊ 19 July 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ha, Jae-shik။ "Prosecutors try to buttress case against killer"၊ 30 July 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Serial killing suspect says he is guilty"၊7September 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Serial Killer Says 21 Victims was JustaBeginning"၊6September 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Geum, Won-seop။ "Suspected Serial Killer Charges Court Bench"၊ 21 September 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Murder suspect causes stir"၊ 21 September 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Alleged killer boycotts court"၊5October 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jeon, Su-yong။ "Accused Serial Murderer Fails to Appear in Court"၊5October 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Serial murder suspect again disrupts court proceedings"၊ 25 October 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Prosecutors demand death for serial killer"၊ 29 November 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Geum, Won-seop။ "Serial Killer Gets Death Penalty"၊ 13 December 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Court sentences serial killer to death"၊ 13 December 2004။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Death Sentence for Serial Killer Confirmed"၊9June 2005။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Death penalty upheld in serial killer verdict"၊9June 2005။ 13 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee, Myoung-jin။ "To Be or Not To Be - Fate of Capital Punishment Hangs in the Balance"၊ 22 November 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Sam။ "Samsung Heir's New Office Is in Prison HousingaSerial Killer"၊ Bloomberg News၊ February 22, 2017။ "Lee is at the Seoul Detention Center, located outside the industrial city of Anyang, south of Seoul. His fellow inmates include Park’s former chief of staff, Kim Ki-choon, and Yoo Young-chul,aself-confessed cannibal on death row for killing about 20 people."
↑ "Suspect in Serial Killing Caught"၊ 18 July 2004။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူးယောင်ချူး&oldid=695058" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။